moi: Free winnowing provided for the convenience of local farmers in Maungtaw
Free winnowing provided for the convenience of local farmers in Maungtaw
The Rakhine social-economic development group (ART) is helping monsoon paddy winnowing to reduce the cost to famers who are running agricultural tasks in the townships and villages of Maungtaw.
Chairman of the ART, U Ba Aye said, “We are givingahelping hand to local farmers in ethnic villages to reduce their farming costs and make it easier in harvesting and winnowing. We are helping local ethnic villages in Maungtaw as much as possible. More than 150 bundles of sheaf of paddy are winnowed per day. This winnowing machine reduces not only financial cost but also time.”
Locals can enjoy their fruitful results through this free support such as timely rice production and lower costs as they have to pay only 10,000 kyats for the cost of engine oil and the wage foraworker per day.
“The assistance of the Team is convenient for us like it was with farmers who have no cattle. Last year, we rented cattle from others for harvesting and winnowing. It takes time to finish agricultural tasks for one acre. This machine helps reduce cost, labour as well as saves time. We don’t worry about rain or wind”, said U Kyaw Aye Tha from Tha Yay Kone Baung village in the southern part of Maung Taw.
The ART is working in ethnic villages such as Kin Chaung, Aung Zeya, Tha Yay Kone Baung, Kha Yay Myaing, Kaing Gyi, Maw Rawadi, Wai Thali, Shwe Baho, U Daung (San Pya) and new Tha Yay Kone Baung villages in the southern and northern parts of Maung Taw District.
“We have helped ploughing since last year. We started to assist winnowing this year. We have rentedamachine operator for winnowing. But the farmers have to pay the wage for machine operator and the cost of engine oil. Our team is also helping as much as possible. We haveaplan to provide more assistance as needed”, Chairman of ART U Ba Aye said.
Local farmer U Aung Tha Kyaw from Aung Zeya village said, “I have many paddy acres. This year, we have grown paddy in 15-acres. It is not my turn for winnowing machine. I have already put my name down for the machine. Currently, we are winnowing with the help of cattle. If we useamachine, we don’t need the ground for threshing paddy. If we winnow with cattle, we need threshing ground. The machine saves time. If we have this, it is more convenient.”
မောင်တောဒေသခံတောင်သူများ စပါးခြွေလှေ့မှုလုပ်ငန်းအဆင်ပြေရန် အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေး
သတင်း- မောင်စိန်လွင်နှင့်အဖွဲ့၊ ဓာတ်ပုံ- မင်းထက်၊ ဖိုးထောင်
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၂၀
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်၊ ကျေးရွာများ၌ နေထိုင်သောလယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်တောင်သူများ ငွေကြေးကုန်ကျမှုသက်သာစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေစေရန် ယခုမိုးစပါးခြွေလှေ့မှုများကိုရခိုင်လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (ART) က အခမဲ့ ကူညီ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဒေသခံတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ သူတို့တစ်တွေ ငွေကြေးကုန်ကျမှု သက်သာစေဖို့နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေဖို့ အခုရိတ်သိမ်းနေတဲ့ မိုးစပါးကို လတ်တလောခြွေလှေ့မှုအပိုင်းမှာ အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး မောင်တောမြို့နယ် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဆောင်ရွက်ပေး နေပါတယ်။ တစ်နေ့ကိုကောက်လိုင်းစည်းအနည်းဆုံးအစည်း၁၅၀ ကျော်တော့ပြီးပါတယ်။ ဒီခြွေလှေ့စက်နဲ့က ငွေကြေးကုန်ကျမှုတင်မကဘဲအချိန်ကုန်ကျမှုအပိုင်းမှာလည်း အများကြီး သက်သာပါတယ်”ဟု ရခိုင် လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (ART) မှဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘအေးက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (ART)က လတ်တလောအကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ပေးနေသောဒေသခံတောင်သူများ အခမဲ့ စပါးခြွေလှေ့မှုတွင် တစ်ရက် စက်သုံးဆီငွေကျပ် တစ်သောင်းနှင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးတစ်နေ့တာလုပ်အားခသာပေးဆောင်ရခြင်းကြောင့် ဒေသခံ တောင်သူများအနေဖြင့် ယခင်ကဲ့သို့ ကျွဲ၊ နွားတို့ဖြင့် စပါးခြွေလှေ့မှုမျိုးမှ ကင်းလွတ်ခဲ့ပြီး အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကျိုးရလဒ်များရရှိခံစားရပြီးဆန်အဖြစ်သို့ ဆောလျင်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“အခုလို လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေးအဖွဲ့က ကူညီတော့ ကျွန်တော်တို့လိုကျွဲ၊ နွားမရှိတဲ့ တောင်သူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ မနှစ်ကဆို စပါးနှယ်၊ ခြွေလှေ့တာကအစ သူများဆီကကျွဲ၊ နွားငှားပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလိုငှားရမ်းလုပ်ရတာက သူတို့အားမှ အသုံးပြု လို့ရတာဖြစ်တော့ စပါးတစ်ဧကပြီးဖို့ဆိုတာ ရက်တော်တော်လေး ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုစက်နဲ့ ခြွေလှေ့ရတာဆိုတော့ ကုန်ကျစရိတ်သာမက လူလည်းသက်သာ၊ အချိန်လည်း သိပ်အကြာကြီး မစောင့်ရတော့ လုပ်ငန်းခွင်အမြန်ပြီးစီးတာပေါ့။ ပြီးတော့ မိုး၊ လေလည်း မကြောက်ရတော့ဘူး”ဟု စက်ဖြင့်စပါးခြွေလှေ့နေသည့် မောင်တောတောင်ပိုင်း သရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာမှ ဦးကျော်အေး သာက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (ART)က လတ်တလော အခမဲ့စပါးခြွေလှေ့မှု လုပ်ငန်း များကို မောင်တောခရိုင်တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းအတွင်းရှိဒေသခံတိုင်းရင်းသား ကျေးရွာများ ဖြစ်သော ကင်းချောင်း၊ အောင်ဇေယျ၊သရေကုန်းဘောင်၊ ခရေမြိုင်၊ ကိုင်းကြီး၊မောရ၀တီ၊ ဝေသာလီ၊ ရွှေဗဟိုလ်၊ဥဒေါင်း(စံပြ)နှင့် သရေကုန်းဘောင်(သစ်) စသည့်ကျေးရွာများ၌ စပါးခြွေလှေ့စက်များဖြင့် အခမဲ့ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ပေးလျက်ရှိသည်။
“ကျွန်တော်တို့က အခုလို အခမဲ့ခြွေလှေ့ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းသာမဟုတ်ဘဲလယ်ထွန်ပေးတာကိုလည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းကစပြီး လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခြွေလှေ့ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းကတော့ ဒီနှစ်မှစခဲ့တာပါ။ ခြွေလှေ့စက်တွေကိုတော့တောင်သူတွေလက်ထဲ အပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စက်ဆရာ ငှားရမ်းထားပါတယ်။ အဲဒီစက်ဆရာလုပ်ခနဲ့ စက်ဆီဖိုးတော့ သူတို့ခံရတာပေါ့။ ဒါတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ တတ်နိုင်တာလေးတွေကို ကူညီလုပ်ဆောင် ပေးတာဖြစ်တယ်။ မောင်တောဒေသခံတောင်သူတွေ အဆင်ပြေအောင်တော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်” ဟုဦးဘအေးက ပြောသည်။ အောင်ဇေယျ ကျေးရွာမှ ဒေသခံတောင်သူ ဦးအောင်သာကျော်ကလည်း“ကျွန်တော်က စပါးဧကများပါတယ်။ ဒီနှစ် စပါးစိုက်တာ စုစုပေါင်း ၁၅ ဧကလောက်ရှိမယ်။ လောလောဆယ်တော့ခြွေလှေ့စက်က အလှည့်မကျသေးဘူး။ စာရင်းတော့ပေးထားပါတယ်။ အလှည့်ကျရင်တော့ ဆက်သွယ်မယ် ပြောတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ နွားနဲ့ပဲ စပါးနှယ်နေရတယ်။ စက်နဲ့ဆိုရင် တစ်ခု ကောင်းတာက စပါးတလင်းလုပ်စရာမလိုဘူး။ ကျွဲ၊ နွားနဲ့ နှယ်တဲ့အလုပ်ကတော့စပါးတလင်းရှိမှ အဆင်ပြေတာပါ။ ပြီးတော့ လှေ့ဦး၊ ပြာဦးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့။ စက်နဲ့ကတော့ အလုပ်လည်း နည်းတယ်။ အချိန်လည်း သက်သာပါတယ်။ အခုလို ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေများရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တောင်သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့” ဟုပြောကြားသည်။
Posted by moi at 2:55 PM